(L) အရက်မှီခိုမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဟော်မုန်း CRF သော့ချက် (ဖိအား) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
အဆိုပါ Scripps Research Institute မှထံမှသိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိပါတယ် တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းကိုတွေ့သည် corticotropin-releasing အချက် (CRF), တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်အရက်မှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
"ငါသည်ဤလေ့လာမှုနှင့် ပတ်သက်. စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်" ဟုအဆိုပါသုတေသနကိုဦးဆောင်သူကိုတွဲဖက်ပါမောက္ခ Marisa ရောဘတ်ကပြောသည်။ "ဒါဟာတစ်ဦးအရက်-မှီခိုပြည်နယ်မှပုံမှန်ကနေလှုံ့ဆော်ပေးသည့်အခါဦးနှောက်ပြောင်းလဲဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက်အတွက်အရေးပါသောခြေလှမ်းကိုကိုယ်စားပြုပါတယ်။ "
အဆိုပါလေ့လာမှုအသစ်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြု. အရက်စွဲအတွက် CRF ၏ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍအတည်ပြု, ဒါပေမယ့်လည်းကြွက်များတွင်ဟော်မုန်းအရက်မှီခို၏ရောဂါလက္ခဏာများသက်သာစေရန်ရေရှည်အခြေခံပေါ်မှာပိတ်ဆို့နိုင်ပါသည်ကွောငျးဖျောပွမသာ။
ယခင်သုတေသနအရက်မှီခိုအတွက် CRF ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်ရှိသော်လည်းတစ်ဦးရန် (အခြားများ၏ဇီဝကမ္မအရေးယူမှုနှောင့်ယှက်မယ့်ပစ္စည်းဥစ္စာ) ၏စူးရှသောတစ်ခုတည်းသောဆေးများအတွက် CRF ပိတ်ဆို့ခြင်း၏ထိရောက်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ လက်ရှိလေ့လာမှု CRF စနစ်ကနေတဆင့် anti-အရက်သေစာသက်ရောက်ပုံများအားပြသခဲ့သည်အားလုံးသော CRF ရန်သုံးခုကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများ, ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, 23 ရက်ပေါင်းများအတွက်ရန်များ၏နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးအရက်မှီခိုနှင့်အတူဆက်စပ်တိုးလာသောက်သုံးရေကိုပိတ်ဆို့ထား။
အရက်, အရက်နှင့်အရက်စားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့၏ဆုံးရှုံးမှု compulsive အသုံးပြုမှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာနာတာရှည်ရောဂါဘယ, တစ်ဦးချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့်အထွေထွေအတွင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းမှနှစ်ဦးစလုံးယူကျုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 40,000 အသွားအလာသေဆုံးမှု၏အကြောင်းတတိယနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအရက်မူးဒရိုင်ဘာပါဝင်ပတ်သက်နေနှင့်တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကုန်ကျစရိတ်နှစ်စဉ်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာအတွက်ဖြစ်ခန့်မှန်းနေကြသည်။
"အရက်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်သုတေသနလူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ပါတယ်" ဟုရောဘတ်, သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်အင်ဂျင်နီယာများများအတွက်ဂုဏ်သတင်းသမ္မတအိမ်တော်အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေး Award ဆုတစ် 2010 လက်ခံရရှိသူကဆိုသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုကျွန်တော်အရက်စွဲ၏ '' အမှောင်ခြမ်း '' လယ်ပြင်၌ပဌနာပွုသောအရာကိုစူးစမ်း။ ဒါကြောင့်ပျြောမှေ့စ-ရာအများကြီးယခင်များ၏အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သုတေသန-ဒါပေမယ့် abstinence နှင့်ဆုတ်ခွာ၏စိတ်ဖိစီးမှုသက်ရောက်မှုကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်သက်သာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စပျစ်ရည်သောက်ရန်မလှူဖြစ်ပါတယ်။ "
CRF ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သဘာဝပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်။ မူလကသာ hypothalamus အဖြစ်လူသိများသည်ဦးနှောက်၏ဧရိယာ၌တွေ့ရှိခဲ့သောကြောင့်ယခုပြုလုပ် corticotropin နှင့်အခြားဇီဝတက်ကြွစွာတ္ထုများ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလှုံ့ဆော်ရှိရာ pituitary, နှင့် amygdala တို့အပါအဝင်အခြားဦးနှောက်ဒေသများတွင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုဧရိယာဒေသသုံးအဖြစ်ပြန်ဆိုထားပြီး ဓါတ်လှေကားစိုးရိမ်စိတ်, ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အရက်မှီခိုနှင့်ဆက်စပ်အလွန်အကျွံသောက်သုံး်ပတ်သက်နေ။
အရက်မှီခိုများအတွက်ဗဟို amygdala အတွက် CRF ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအတည်ပြုဖို့, သုတေသနအဖွဲ့သည်ယခင်ကဤပြဿနာကိုအသုံးချမဟုတ် electrophysiological နည်းလမ်းများပါဝင်သည်တစ် multidisciplinary ချဉ်းကပ်နည်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဤအဆယ်လူလာလေ့လာမှုများကနေရလဒ်တွေကို CRF အရက်နဲ့ဆင်တူတဲ့ထုံးစံ၌အာရုံခံအတွက် inhibitory synapses (နှစ်ခုအာရုံကြောဆဲလ်များအကြားဆုံ) ၏အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဤပြောင်းလဲမှုအာရုံခံစိတ်လှုပ်ရှားထိန်းညှိအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍသော neurotransmitter ဂါဘမြို့သား၏တိုးမြှင့်ဖြန့်ချိမှတဆင့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
CRF ၏သက်ရောက်မှု CRF ရန်များ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှတဆင့်ပိတ်ဆို့နိုင်လျှင် ဆက်လက်. အသင်းစူးစမ်း။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သိပ္ပံပညာရှင်ဦးနှောက်အချပ်ထဲမှာအရက်ဆန့်ကျင် (antalarmin ကိုခေါ် NIH-1 နှင့် R3) သုံးခုကွဲပြားခြားနားသော CRF121919 ရန်စမ်းသပ်ပြီးနှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးမှီခိုထုတ်လုပ်မယ်လို့အခြေအနေများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ကြွက်၏ဦးနှောက်ထဲသို့ 121919-နေ့ရက်ကာလအဘို့ R23 ထိုးသွင်း အရက်အပေါ်။
ထူးခြားသည် CRF ရန်တဦးကိုလက်ခံရရှိသည် "အရက်-မှီခို" ကြွက် (R121919) ၏အပြုအမူကိုသူတို့ Non-စွဲ ( "နုံ") counterparts တွေကို mimicked ။ အဲဒီအစားတည်းကကုသမှုမရှိဘူးအရက်-မှီခိုကြွက်နှင့်တူအရက်ပမာဏ, အကုသကြွက်များနှင့်သာအလယ်အလတ်ပမာဏသာရှိသူတို့၏ Non-စွဲညီအစ်ကိုတို့ကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအရက်နှစ်မျိုးလုံးကိုထုတ်ရှာကြံ၏။
"ဒါဟာအရေးပါတဲ့လေ့လာရေး CRF စနစ်များတိုးမြှင့် activation မှီခိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်အတူဆက်စပ်အလွန်အကျွံသောက်သုံး mediates ကြောင်းအကြံပြု," ရောဘတ်ကပြောသည်။ "တစ်နည်းအားဖြင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာ CRF1 ရန်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူ CRF ပိတ်ဆို့ခြင်းအပြုအမူနှင့်ဇီဝကမ္မအခြေအနေများအမျိုးမျိုးအောက်မှာအလွန်အကျွံအရက်သောက်သုံးတားဆီးလိမ့်မည်။ "
အရေးကြီးတာက, လေ့လာမှုအတွက်ကြွက်အရက်သောက်ခြင်းအပေါ် R121919 ၏ဖိနှိပ်သက်ရောက်မှုမှသည်းခံစိတ်ပြခဲ့ပါဘူး။ ကလက်တွေ့ setting ကိုအတွက်ထပ်တလဲလဲအသုံးပြုခဲ့မည်အကြောင်းတည်းအဖြစ်တကယ်တော့သူတို့ဟာဝင်း၏ဤအမျိုးအစားများ၏ထိရောက်မှုများအတွက်အချိန်-ကောင်းသောနိမိတ်လက္ခဏာကို ပို. ပင်ယင်း၏သက်ရောက်မှုမှအထိခိုက်မခံကျော်ဖြစ်လာကြပေမည်။
အဆိုပါသိပ္ပံပညာရှင်များ '' ဆယ်လူလာလေ့လာမှုများကိုလည်း CRF1 ရန်များ၏အလားအလာအပေါ်သက်ရောက်မှုများထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ CRF ရန်အားလုံး Basal GABAergic တုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်အရက်ဆိုးကျိုးများဖျက်သိမ်း။ အရက်-မှီခိုကြွက်ဦးနှောက်၏ဗဟို amygdala ဒေသတွင်ဂါဘမြို့သားလွှတ်ပေးရေးအပေါ် CRF နှင့် CRF1 ရန်ဖို့ကြီးထွား sensitivity ကိုပြ။ ဗဟို amygdala သို့ CRF1 ရန်အုပ်ချုပ်မှု extracellular ဂါဘမြို့သားအတွက်မှီခို-related မြင့်တက်ပြောင်းပြန်နှင့်မှီခိုနှင့်နုံနှစ်ဦးစလုံးကြွက်များတွင် extracellular ဂါဘမြို့သားအတွက်အရက်-သွေးဆောင်တိုးပိတ်ဆို့။ မှီခိုကြွက်များ၏အလယ်ပိုင်း amygdala အတွက် CRF နှင့် CRF1 mRNA ၏အဆင့်ဆင့်ကိုလည်းခြီးမွှောကျခဲ့သညျ။
ရောဘတ်အလုပ်၏အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရှုထောင့်ကစိတ်ဖိစီးမှု-related အပြုအမူတွေအကြားဖြစ်နိုင်ခြေဇီဝကမ္မ link ကို, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်း (ဆိုလိုသည်မှာစိတ်ဖိစီးမှုမမှန်, စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါ) နှင့်အရက်မှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းကြောင်းမှတ်ချက်ပြုထားသည်။
ယင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာမောင်းနှင်မူးယစ်နေစဉ်ယာဉ်မောင်းများနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ Operating သင့်ရဲ့ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များ၏ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နှင့်ဂုဏ်သတင်းဟာအရည်အချင်းပြည့် San Diego မှ DUI ရှေ့နေချုပ်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်ကာကွယ်ပါ
1 ။ et al Marisa ရောဘတ်။ Corticotropin Factor-သွေးဆောင် Amygdala Gamma-Aminobutyric အက်ဆစ်ဖြန့်ချိအရက်မူတည်အတွက် Key ကိုအခန်းကဏ္ဍဖြင့်ထုတ်လွှ။ ဟားဗတ်, Doi: 10.1016 / j.biopsych.2009.11.007